ClickMeter: Fanarahan-dia Rohy fampielezan-kevitra, fanarahan-dia Affiliate, ary fanarahana ny fiovam-po | Martech Zone
Matetika, indrisy, ny hetsika fanarahan-dia ny rohy raha toa ka mandroso fampielezan-kevitra ny orinasa, manara-maso ny fanarahan-dia ny rohy, na mandrefy ny fiovam-po. Ny tsy fahampian'ny fifehezana amin'ny fampivoarana sy ny fanarahan-dia ny rohy dia mety hiteraka olana marobe any ambanivohitra izay tena tsy afaka mandrefy ny zava-bita amin'ny mpanelanelana sy fantsona.
ClickMeter dia sehatra afovoany miaraka amina API mifandraika amin'izany izay ahafahan'ny orinasa, sampan-draharaha, mpanao dokambarotra ary mpanonta manangana fomba manodidina ny fampiharana sy fandrefesana ny tahan'ny click-through. Ny sasany amin'ireo fiasa lehibe azon'izy ireo ekena dia ahitana ny fanarahan-dia, ny fanarahana ny fanovana, ny famoronana piksela fanarahana, ny masontsivana URL fohy, ny fidiran'ny URL ny Google URL, ny fampidirana fohy ny orinasa Bitly, ny geo-target IP, ny fitantanana rohy misy marika ary ny fihodinan'ny rohy.
Rohy alefa, làlana, fanaraha-maso ary fiaraha-miasa
ClickMeter manana endri-javatra tsy mampino mihoatra ny 100:
redirects - ny fiasa ho an'ny redirection dia misy ny fanodinana kendrena arakaraka ny firenena, fiteny, karazana fitaovana ary karazana mpampiasa. Ny fanovana dia mety ho kisendrasendra ihany koa, filaharana, lanja, tsindry voalohany, tsindry farany, fanisam-bidy, fiarovana ny teny miafina, fandaharam-potoana, SSL sy tsy SSL, mavitrika, fihodinan'ny IP, namana milina fikarohana, masontsivana URL, jirofo manaingo, fampidirana URL , fanitarana ny pejy, fanesorana referral, referérer tsy fantatra anarana, ambaratonga voalohany na subdomain, tagging link, cloning rohy, ary fanafarana rohy be indrindra na famoronana.
Fanarahana ny rohy - Ny rohy dia azo arahana amin'ny timestamp, adiresy IP, firenena, faritra, tanàna, fandaminana, fiteny, karazana browser, karazana platform, finday, karazana mpitsidika, tokana / tsy manam-paharoa, loharano, fari-pitsipika manokana, teny lakile, sns.
Fanarahana ny fiovam-po - Ny fanovana dia azo arahana amin'ny sehatry ny fantsona, cookies azo amboarina, fiovam-po marobe, kara-panondro vokatra, fari-pitsipika manokana, sandan'ny fiovam-po, sanda komisiona, SSL na fitsapana tsy SSL, fitsapana A / B, tsiambaratelo UE, fanilihana IP, fanakanana spam rohy, ary URL an'ny fampielezan-kevitra Google Analytics UTM.
Link Analysis - KPI dashboard, tatitra momba ny fironana, tatitra momba ny fampielezan-kevitra, tatitra momba ny pixel, fampitahana ny fiovana, tsindry Click, tsindrio an-tsarintany, vanim-potoana, mpitety, tanàna, firenena, ISP, masontsivana, loharano, teny lakile, adiresy IP, tahan'ny fiovam-po, tag, fiteny, vola ary maro hafa.
Tatitra momba ny rohy - Fanondranana Excel (CSV), tatitra hitsin-dàlana, fampandrenesana mailaka ary feo, tatitra azo ovaina (logo, zotram-potoana, vola ary fiteny).
Fiaraha-miasa rohy - fizarana manokana, fizarana ampahibemaso, fizarana amin'ny alàlan'ny mailaka, fitantanana kaonty ambany ary rohy fidirana ho azy.
Fampidirana rohy - miaraka amin'ny Adwords, tambajotram-pifandraisana, Google Analytics, Backpage, Chrome, Firefox, Megaphone, Rebrandly, Retargeting, Remarketing, Safari, Shopify, ary WordPress.
Development - teboka feno misy endri-javatra API, antontan-taratasy amin'ny antsipiriany, tontolon'ny boaty fasika, fanalahidy API marobe, ary consulting misy.
Ahoana ny fomba hanateran'ny ClickMeter lanja
Manomboha amin'ny ClickMeter
Fampahalalana: mpiara-miasa aminay i ClickMeter.
Tags: fanaraha-maso Affiliateclickmeterfanarahana ny fanovanaanalytics momba ny rohyfanarahana rohyfampidirana ny fanarahana rohytatitra momba ny fanarahana rohyredirect amin'ny firenenaaverina arakaraka ny karazana fitaovanaavereno amin'ny fitenyny fihodinana